Maleeshiyada Al-Shabaab Oo Dad Xoolo Dhaqato Ah Ku Dilay Deegaanka Jiracle Ee Gobolka Hiiraan | Radio Muqdisho	Friday, May 24th, 2013	Bogga Hore
Maleeshiyada Al-Shabaab Oo Dad Xoolo Dhaqato Ah Ku Dilay Deegaanka Jiracle Ee Gobolka Hiiraan
Published on October 19, 2012 by Jayte · 2 Comments · 1,022 views
Maleeshiyo ka tirsan firxadka kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dad xoolo dhaqato ah oo ku nool deegaanka Jiracle ee gobolka Hiiraan halkaasi oo dad rayid ah dil ugu geysteen.
Wararka aynu deegaanka Jiracle oo qiyaastii 40 KM dhanka Waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee xalay deegaankaasi ay weerar u qaadeen Maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo iyagu doonayey in dadka deegaanka oo xoolo dhaqato ah xoolahooda dhac u geystaan.
Dad goobjoogayaal ah oo ku sugan deegaanka Jiracle ayaa u sheegay Radio Muqdisho in Maleeshiyadaasi ay dil u geysteen laba ruux oo ka mid ah dadka deegaanka ayagoo sidoo kalena dhaawacay tiro intaasi ka badan waxaana dadka ay dileen iyo kuwa ay dhaawaceenba la sheegayaa iney u diideen xoolahooda.
Maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaa deegaankaasi ka cararay ayadoo dhacdadanna ay qeyb ka tahay tacadiyada ay kooxda galabkeedu sii dhacayo ee Al-Shabaab u geysteen dadka Soomaaliyeed.
somaliya says:	October 19, 2012 at 11:20 pm	waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw soomalaiyey maxanihelay war ilahey kacabsada san nodhama wadan kena wan ubahanahay ilahey kacab sada soomaliyey
Reply »	shuushuu says:	October 21, 2012 at 1:39 pm	afka kaga alaha naga kiin qabto waaba idin nacane somaliyana alaha idinka cirib tiro